IMac Lion Yobumbano | Kusuka kuLinux
IMac Lion Yobumbano
Abasebenzisi abaningi bathanda ukubukeka kwe- Mac OS futhi noma yini abayishoyo, nami. Kungani ngingazi, ngicabanga ukuthi okuthile kuhlobene nokuthinta okuhlukile, okuhle nenengqondo kwemiklamo ye- Apple.
Kepha ngamafuphi, ngithanda izinto eziningi ngale nkampani kepha hhayi amanani ayo, noma indlela yayo evaliwe yokuyinikela, ngakho-ke uma ufana nami futhi ngaphandle kwalokho, usebenzisa Ubuntu 11.10, le nhloko ye Unity Kungaba usizo kuwe.
Ungayilanda kusuka ku- Deviantart.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso » IMac Lion Yobumbano
Ngisayithanda itimu ezenzakalelayo Ambiance ngaphezulu
Indoda eyiqiniso, kuhlale kunezinye izindlela 😀
Ngiyakubuza, uyamlungisa yini wonke umuntu okuthumela iSMS njalo uma esebenzisa izifinyezo? Yebo, ukuze ubheke ku-RAE:
Sonke sinelungelo lokungahambi kahle nge-2pre, futhi okubonisayo akuyona iphutha lesipelingi, kuyiphutha lokuthayipha.
Ngabe uyalungisa wonke umuntu okuthumela iSMS njalo uma esebenzisa izifinyezo?
Cha, yiHOYGAN kuphela
okuvezayo akulona iphutha lesipelingi, kuyiphutha lokuthayipha.
Haha lungiselela ukuthola ukugxekwa ngokwehluleka, njengoba ngenza kuwo wonke umuntu oku-intanethi (nasempilweni yangempela) akukho okunye okwenzekayo
Hahaha inqobo nje uma zakha, thumela konke ukugxekwa okufunayo .. 😛
Uma isabizwana sisho ibizo "ukugxeka", lapho-ke kufanele uthi "ngenza kanjani" hhayi ukuthi "ngenza kanjani".
Ubenzani kubo? : "Abagxeki.
Manje lapho ngithumela i-tweet ku-akhawunti KusukaLinux Twitter, Ngizofaka ukuthi lapha ufunde nge-SWL futhi ngaphezu kokupela isipelingi LOL !!!, Isibindi, ngemuva kokufunda okuthunyelwe kwe- Ishumi nantathu Ngingakutshela kuphela: Touche HAHA !!!
Indoda, ukuthi ngiqonde ukuthi "lokho", okufana nokuthi "ukugxekwa" kuleli cala
Lapho uwunikile .. Futhi ungithumela yona ngeRAE hahahaha
Akunandaba ukuthi uzama kanzima kangakanani, angiwenzi amaphutha ohlelo lolimi
Ukusetshenziswa kwezabizwana ezihlobene kuphoqa ukugcina ubulili nenombolo yebizo noma yomuntu ebhekiswe kuye.
Uma uthi "ngi ... kuwo wonke umuntu ..." ubophezelekile ukuthi uthi "the", ngoba "ukugxeka" yilokho okwenzela wonke umuntu. "
Uma ufuna ukubhekisa esenzweni sokugxeka kufanele ususe u- "Mina" bese uthi: "njengoba ngenza kuwo wonke umuntu ..." hhayi "njengo" ngikwenza kuwo wonke umuntu.
Ngiyethemba ngikuchazile ngokucacile nokuthi ukuthatha njengokugxeka okwakhayo, njengoba nakanjani kuyilokho okwenzayo.
Uma kungangikhathazi, kodwa bengilokhu ngikusho kanjalo impilo yami yonke, kufanele kube yiphutha esinalo lapha
Engikwaziyo nje ukuthi kufanele ngithathe amakilasi amaningi oLimi lwaseSpain hahahaha ..
Ingqikithi yinhle kakhulu ngiyabonga ngokusebenzisa enye yemiklamo yami njengephepha lodonga 😀
Ukubingelela .. Iphephadonga lifaka phakathi ukuthunjwa okwethulwe ngumbhali wendikimba, noma kunjalo: Umsebenzi omuhle!
imikhonzo .. landa isihloko bese ulandela imiyalo encwadini futhi lutho!
Yini ngempela oyenzile? Umbuzo uyisilima kepha usebenzisa Ubunye angithi?
yebo, ubunye… engikwenze ncamashi kwakuwukuthi: faka njenge-Sudo kukopi ye-nautilus kumafolda awo ahlukile ingxenye ngayinye yetimu (izithonjana, ingqikithi nomsindo) faka i-gnome tweak futhi ukusuka lapho kufanele ngibe nezinketho zokuguqula ingqikithi , futhi kuvela kuphela izithonjana zalesi sihloko nakho konke okuza ngokuzenzakalela…. Akuyona into ebalulekile, ngithanda nje ukucabanga nge-Ubuntu bami…. Ngemuva kokusebenzisa ubumbano isikhashana ukujwayela futhi kugobolondo le-gnome ngifuna ideshi, inhlanganisela yekhibhodi, efanayo ewindini lomsebenzi, le ubuntu igelezela kimi nokuthi ngine-celeron engu-1.8… .
Ungawahlanza kanjani amadiski akho futhi usule amafayela ngokuphepha
Ungayakha kanjani imiphumela yesithunzi se-desdelinux nge-Gimp